कोरोना सँगसँगै ओली भाइरससँग लड्नु छ : बाबुराम भट्टराई « News24 : Premium News Channel
काठमाडाैं, ८ माघ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना सँगसँगै ओली भाइरससँग लड्नु पर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आज (बिहीबार) सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले भन्नुभएकाे छ- ‘कोरोना सँगसँगै ओली भाइरससँग लड्नु छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपा विरोधमा उत्रिएको छ ।
भट्टराईले कोरोनाविरूद्धको खोप सरकारले अन्यत्रबाट मागेर ल्याएकोबारे टिप्पणी पनि गर्नुभएकाे छ । डेढ प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप सरकारले भारतबाट सहयोग लिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भट्टराईले बाँकी जनतालाई कहिले खोप दिने भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभएकाे छ ।
भारत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आज (बिहीबार) काठमाडौं आइपुग्दै छ । हिजाे (बुधबार) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भारतले अनुदानमा १० लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिनुभएकाे थियाे ।
यही प्रसंगमा भट्टराईले बिहीबार बिहान ट्वीट गर्दै भन्नुभएकाे छ- ‘मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न..’भन्ने गीत रेडियोमा खुबै सुनिन्थ्यो! अहिले कोरोना माहामारी विरूद्धको खोप पनि मागेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि चार लाख अर्थात् डेढ प्रतिशत जनतालाई मात्र पुग्ने रे। बाॅकीलाई कहिलेसम्म होला? कता हात थाप्ने होला? फेरि कोरोना संगसंगै ओली भाइरससंग लड्नु छ !’